EX - ABSDF: နေပြည်တော် မိစ္ဆာာများ ကြောက်နေသော ဂါထာ (၅) ပုဒ်
Hlayeirhtut Htut shared Maha Mingyi's photo.
နေပြည်တော်အစိုးရမှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာပြီဟု နိုင်ငံတကာ အစိုးရ များမှ ရှူးတိုက် သြဘာပေးနေ သကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများအချို့တော်တော်များမှပင် အူယားဖား ယား ထောပနာပြုကာ ယခင် အာဏာရှင် ဘ၀မှ အရေခွံလဲလာသော အရေခြုံမိစ္ဆာာများအား ဖင်ပင့်ကာ အမှားနှင့်အမှန်လုံးထွေးသွားကြရပြီး ဓမ္မဓိဌာန်ပြောက်သွားရသော ၈၈ လှုပ်ရှားမှုနှင့် စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အား ရောက်ရှိသွားပြီဟု ပြောဆိုနေကြလေ၏။ အန်ဂျီအိုများနှင့် ၄င်း၏ ငွေဝယ်ကျွန်ကြီး ကျွန်ကလေးများကလဲ လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု သည် ပြိုင်စံရှားသော ပြောင်းလဲမှုဟုပင် ထဟောင်နေသောကြောင့် သိသာအောင် ဖေါ်ပြပါ ဂါထာ (၅)ပုဒ်အား အနုလုံပတုလုံ ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှလည်း Myanma Oil and Gas Enterprise မြန်မာ့ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချရေး လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ ထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုများအား သိသာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တင်ပြတောင်းဆိုဘူးခဲ့ဘူးသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ဖေါ်ပြပါ (EITI-အီတီ) နှင့်ပတ်သက်သော ကောင်းမွန်ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် နိုင်ငံတကာက အသိမှတ်ပြုသော စီးပွါးရေး ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်မှု ဆိုသော စာချုပ်အား ချုပ်ဆိုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးလား? ဟု မေးခွန်းအကြီးကြယ်ထုတ်သင့်သည်။
Is Myanmar ready for EITI
မှတ်ချက် ။ ။ ယခင် အစိုးရ ခိုးခဲ့သော အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ထောင်ပေါင် ၉၀ နီးပါး အား စာရင်းအင်း အချက်လက်များဖြင့် မကြာခင် တင်ပြပါမည်။